Maxayaarada la tuuri karaa maxay sameyn karaan | DEYI
Marka hore: xoq weelka miiska. Guud ahaan marka lagu hadlayo, maaskaaradan waxay ka kooban tahay maro aan laga tolan. Maaddadan waxaa laga yaabaa inaysan u xoog badnayn sida suufka iyo walxaha kale, laakiin maadadan waxay leedahay labo faa iido: biyo ma nuugo mana ahan mid aad u adag. Wixii looxyo ah ee dhuuqda biyo fara badan una badan inay timaha daadiyaan, maadada dharkan aan duubneyn ayaa aad ugu habboon dharka maydhashada.
Ilaa iyo inta aad diyaarinayso maaskaro, ka dibna aad ka saarto fiilada birta, waad u isticmaali kartaa inaad ku maydho saxamada. Sababtoo ah ma nuugo biyo ama saliid, waxaad si fudud u nadiifin kartaa suxuunta waxaadna ka saari kartaa saliida.
Midda labaad: biyaha miiraha, qoysaska qaarkood waxay rakibi karaan biyo nadiifiye si loo sifeeyo biyaha, laakiin maahan muhiim inaad u isticmaasho biyaha nadiifiyaha biyaha inay ku maydhaan khudradda iyo gacmaha jikada. Ka dib oo dhan, qiimaha nadiifinta biyahan ayaa wali ah mid aad u sarreeya. Si kastaba ha noqotee, waxaad ka walwalaysaa tayada biyaha adigoon isticmaalin nadiifiyaha biyaha.
Xaqiiqdii, waad ku xirin kartaa maaskaro tuubada biyaha, oo waxaad ku duub kartaa maaskaro maaskaro ku yaal bannaanka tuubbada. Sidan, biyaha ku qulqulaya maaskaro si taxaddar leh ayaa loo sifeeyaa. In kasta oo ay wali ka fog tahay saameynta nadiifiyaha biyuhu, waxaa sidoo kale laga yaabaa in lagu sifeeyo qaar ka mid ah walxaha waaweyn, sida miridhku iyo ciidda, sidoo kale waxay noqon kartaa waxoogaa yar oo hubin ah oo biyo ah. Qiimaha maaskaraduna qaali maaha. Waxay qaadataa oo keliya shan ama lix senti maalintii in lagu beddelo maaskaro shan ama lix maalmood gudahood.
Saddexaad: Ilaali saxanka musqusha, jikada jikada gaar ahaan way fududahay in la xannibo, sababtoo ah halkan badanaa waxay ku shubaysaa xoogaa biyo dhaqitaan ah ama wax jira, waxaa jiri doona hadhaa cunto ah, hadhaaga cuntada waa fududahay in la xannibo, dhab ahaantii, qof walba wuxuu leeyahay Tijaabi habka, taasi waa, ku rakib gabal tulle booska santuuqa si loogu oggolaado tulleani inuu door ka ciyaaro xiritaanka walxaha waaweyn ee qashinka cuntada.
Qaabka ayaa sidoo kale fudud, taas oo ah, in la kala saaro saddexda lakab ee maaskaro si gooni gooni ah, ka dibna dooro hal lakab oo ku dheji weelka mashiinka, labada haad ee hartayna waxaa loo isticmaali karaa is-dhaafsi, si marka biyuhu biyuhu u dhex maraan, qaar ka mid ah walxaha waaweyn iyo qaar ka mid ah caleemo khudradda ama diirka Wax kasta oo si dabiici ah looga xannibi karo maro maaskaro ku dheggan. Ilaa iyo inta laga saarayo maro maaskaro, wasakhda ayaa lagu duubi doonaa isla markaana aad bay ugu habboon tahay in toos looga tuuro.
Waqtiga boostada: Jul-13-2020